Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Alemana » Ny governemanta Alemana vaovao dia manara-dalàna ny marijuana
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Entertainment • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny governemanta Alemana vaovao dia hanara-dalàna ny fihinanana marijuana
Ny fifanarahan'ny governemantan'ny fiaraha-mitantana eo amin'ny Demokraty Sosialy, ny Demokraty Malalaka ary ny Maitso ao amin'ny firenena dia ahitana fepetra hanakanana ny fihinanana marijuana.
Araka ny vaovao farany, ny governemanta fiaraha-mitantana vaovao Germany dia hametraka rafitra 'fizarana voafehy ny rongony ho an'ny olon-dehibe' ho an'ny 'fanjifana fialam-boly' amin'ny alàlan'ny fivarotana nahazo alalana.
Araka ny lahatsoratry ny antontan-taratasy azon'ny alemaina vaovao, ny fifanarahana ataon'ny governemantan'ny fiaraha-mitantana eo amin'ny Demokraty Sosialy, ny Demokraty Malalaka ary ny Maitso ao amin'ny firenena dia ahitana fepetra hanakanana ny fihinanana rongony.
“Te-hametraka fanaraha-maso hentitra ny vokatra ny fiaraha-mitantana mba hiantohana ny kalitaony sy ny ‘fiarovana ny zaza tsy ampy taona’”, hoy ny fifanarahana.
Ny fepetra ho ara-dalàna ny fialam-boly rongony tafaporitsaka tamin'ny herinandro lasa teo alemaina fampitam-baovao avy amin'ny loharanom-baovao avy amin'ny ankolafy telo. Marijuana fanafody dia ara-dalàna ao amin'ny Vondrona Eoropeana hatramin'ny taona 2017.
Natao tany Berlin ny fihodinana farany tamin'ny dinika fiaraha-mitantana telo. Ny Demokraty Sosialy Olaf Scholz dia voatendry handray ny toeran'ny Chancellor, hisolo ny mpitarika alemà zokiolona Angela Merkel, izay tsy nifidy indray.
Ny Union Christian Democratic Union (CDU) mpandala ny nentin-drazana sy ny mpiara-dia amin'ny Christian Social Union ao Bavaria (CSU) dia nampiseho fahombiazana tamin'ny fifidianana ankapobeny tamin'ny Septambra, raha nahazo tombony lehibe kosa ny antoko Scholz. Ny Antoko Demokratika Sosialy (SPD) afovoany havia dia naleon'ny niray tsikombakomba tamin'ny Maitso sy ny Demokraty Malalaka (FDP) avy amin'ny elatra havia toy izay nitady vaovao antsoina hoe 'Grand Coalition' miaraka amin'ny Christian Democrats.